Fitbit Alta waa jijin cusub oo shirkaddu tiraahdo | Wararka IPhone
Fitbit Alta waa jijin cusub oo shirkaddu tiray
In muddo ah hadda, in ka badan smartwatches, jijimooyin naga caawinaya inaan qiyaasno dhaqdhaqaaqa jirkeenna ayaa noqday kuwo moodada ahAma si fudud annaga oo tirinayna talaabooyinkeena ama haddii aan rabno in aan xakameyno dhaqdhaqaaqeena jimicsiga sida ugu macquulsan, waxaan dooran karnaa moodooyinka sidoo kale xakameynaya garaaca wadnahayaga.
Fitbit Alta cusub, wuxuu na siiyaa a Shaashadda taabashada OLED halkaasoo ogeysiisyada sida ballamaha jadwalka, wicitaannada taleefannada, farriimaha qoraalka la soo bandhigo ... laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan si shakhsi ah u jijinno jijimadda leh maqaar kala duwan, bir iyo xargaha dahabiga leh.
Fitbit Alta wuxuu na siinayaa ismaamul 5 maalmood ah intaadan marin xeedho. In kasta oo aan u adeegsan karno inaan ku qiyaasno howl maalmeedkeena, waxaan ku faraxsanahay tallaabooyinkeenna, kiiloomitirradii aan safarnay, tirada kalooriyada gubatay iyo xitaa daqiiqadihii aan sameynay wax dhaqdhaqaaq isboorti ah.
Laakiin sidoo kale waxaa ku jira muuqaalka gaarka ah ee Fitbit ee loo yaqaan Smart Track oo raqbal nashaad kasta in aan sameyneyno iyada oo aan horay u qaabeyno nooca jimicsiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay si joogto ah nooga digeysaa markaan taaganahay mudo dheer si aan u kacno oo aan xoogaa u dhaqaaqno si aan u gaarno hadafkii aan nafteenna u dhignay.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee jijintan cusub ee soo saaraha Fitbit laga helay fursadaha habayn taasi waxay bixisaa. Qaabka aasaasiga ah ee leh xargaha midabada leh Waxaan ka heli karnaa dukaanka Fitbit inta lagu jiro xilliga boos celinta, 139,99 euro. Laakiin haddii aan doorbidno suunka maqaarka waa inaan bixinnaa 69,99 euro. Dhinaca kale, haddii aan rabno suunka birta, waa inaan dhex marnaa sanduuqa si aan u dhammeyno 99,99 euro. Dhinaca kale, haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan soo iibsanno suun kale oo ka mid ah waxyaabaha caagga ah ee lagu soo saaray, waxaan kala dooran karnaa midabada madow, buluug, tubta iyo sumadda u dhiganta 29,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Fitbit Alta waa jijin cusub oo shirkaddu tiray
Sii haddii ... Weli waxaan la joogaa Xiaomi si cad ... Iskuduwaha hoos u dhaca iguma soo wacaan gabi ahaanba, ha dhihin qiimaha, € 70 for suunka? Hahaha wacan
20 Magaalo oo Cusub Ayaa Kusoo Biiray Khariidadaha Apple Flyover View